Go'aanadii Adkaa Ee Uu Qaatay, Dooda Courtois Vs Navas, Dareenka Guushii Celta Vigo Iyo Zinedine Zidane Oo Waxyaabo Badan Ka Hadlay. - GOOL24.NET
Go’aanadii Adkaa Ee Uu Qaatay, Dooda Courtois Vs Navas, Dareenka Guushii Celta Vigo Iyo Zinedine Zidane Oo Waxyaabo Badan Ka Hadlay.
Zinedine Zidane ayaa guul muhiim ah ku furtay waayihiisa labaad ee Santiago Bernabeu laakiin waxaa si wayn looga hadlay go’aanadii banaa ee uu ka sameeyay kulankiisii ugu horeeyay ee Celta Vigo isaga oo shaxdiisa ku soo bilaabay goolhaye Keylor Navas, Marcelo, Iso, Gareth Bale iyo Marco Asensio.
Zidane ayaa difaacay go’aanada uu qaatay ee uu shaxdiisa ugu soo bilaabay xido soo dhibtoonayay xili ciyaareedkan isla markaana kursiga kaydka ku soo jiray wuxuuna Zidane sheegay in uu hayso koox ciyaartoy ah oo ka kooban 23-25 isla markaana uu dhamaantood ku xisaabtamayo.
Zidane oo saxaafada la hadlayay kadib guushii Celta Vigo ayaa yidhi: “Ma jiro qof halkan jooga ama meel kale oo ciyaartoydan ka qaadi kara wixii ay halkan ku qabteen. Waxaan haystaa koox 23,24,25 ciyaartoy ah, dhamaantoodna waan ku xisaabtamayaa”.
Zidane oo si gaar ah uga hadlaya saamaynta isbadalkii uu ciyaartoyda ku sameeyay ee ay qaar booskooda waayeen ayaa yidhi: “Thibaut Courtois iyo Sergio Reguilon ilaa hadda si fiican ayay u shaqeeyeen si la mid ah kuwa kale, laakiin Keylor aad ayuu u fiican yahay, sidoo kale Marcelo iyo Isco. Waxaa waajib igu ah in aan ciyaartoydan ku xisaabtamo maadaama oo ay ciyaartoy fiican yihiin, laakiin dhamaantood waan ku xisaabtami doonaa”.
Zidane oo qiimaynaya kulankii Celta Vigo ayaa yidhi: ” Wixii aan jeclaystay waxa uu ahaa in aanu samaynay in ka badan 20 karoos, dhamaadkii waxaanu helnay dhamaystirka, waxay taasi na siisay fursada aanu goolal ku dhalinay waananu dhalinay”.
“Waxaan aaminsanahay in dhamaan ciyaartoydu halkani ay ogyihiin in ay waajib ku tahay in ay ciyaaraan kubbada cagta, taasi waa waxa aan jecelahay, waana waxa ay ciyaartoydu jecel yihiin, laakiin sidoo kale marka aanaad kubbada haysan, waxaa qasab nagu ah in aanu orodno si aanu dib ugu helno” ayuu Zidane hadalkiisa sii raaciyay.
Zidane oo si gaar ah uga hadlaya, Keylor Navas, Marcelo, Isco iyo Marco Asensio ayaa yidhi: “Anigu waxaan ogahay ciyartoyda ay yihiin, halkan ayay hore ugu muujiyeen, waxaan doonayaa in aan iyaga ku xisaabtamo. Ciyaartoydii inta waxa yar ciyaartay ee Keylor, Marcelo, Isco iyo Marco waxay manta muujiyeen taas”.
Waxaa la filayaa in Zidane uu isbadal badan samayn doono suuqa xagaaga kadib ee dhamaadka xili ciyaareedkan wuxuuna markii wax laga waydiiyay ku jawaabay: “Isbadalo ayaanu yeelan doonaa, laakiin wax intaas ka badan ma sheegi karo. Anigu halkan kuma qaadan karo mid kasta oo ka mid ah 10 ka kulan aniga oo ka fikiraya in qofkii si fiican u ciyaaraa uu sii joogi karo, kii si xun u ciyaaraana ay waajib tahay in uu baxo”.
Intaa kadib waxaa markiiba bilaabantay dooda Navas iyo Courtois oo uu markiiba Zidane cadeeyay doorashadiisa wuxuuna yidhi: “Maanta waxaa ciyaaray Keylor, sidoo kale waxaa ciyaari doona Thibaut, waxaanu haysanaa Luca Zidane ee ka goolhayaha saddexaad. Madrid waxay u baahan tahay laba, saddex , afar goolhaye oo fiican, sidaa daraadeed, markastaba tababaraha dhibaato ayaa haysanaysa, laakiin ilaa dhamaadka xili ciyaareedka labadoodaba waan ku xisaabtamayaa, waynu kari doonaa kadib”.